कून बैंकका कर्मचारीले कति कमाए ? कति खर्च गरे ? (सूचीसहित) - Nepal News - Latest News from Nepal
कून बैंकका कर्मचारीले कति कमाए ? कति खर्च गरे ? (सूचीसहित)
२५ जेठ, काठमाडौं । इटहरीकी सृष्टि कोइराला बैंकको जागिर भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन् । कारण, राम्रो सेवा सुविधा र जागिरको सुरक्षा । शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नात्तकोत्तर गर्दै गरेकी कोइरालाले एक वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकमा लिखित परीक्षा दिएर जागिरका लागि नाम निकालेकी थिइन् । तर, मौखिक परीक्षामा उनी असफल भइन् ।
‘आफ्ना मान्छे नहुँदा मौखिकमा पास गर्न गाह्रो रहेछ’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भनिन्- ‘तर, निरन्तर प्रयास गरिरहन्छु, एकदिन सफल भइएला नि ।’
सृष्टिमात्रै होइन, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको जागिर निकै आकर्षक बन्दै गएको छ । क्षमताअनुसारको आकर्षक तलब-भत्ता तथा सेवा सुविधा र बोनसले धेरै युवा जनशक्तिलाई बैंकिङमा आकषिर्त गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा रहने हुनाले बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरुको तुलनामा बढी पारदर्शी पनि छ ।
त्यसो त, बैंकहरुले कर्मचारीको तलब/भत्तामा नाफाको ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्दै आएको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ३० वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए र १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरे । वाणिज्य बैंकहरुमा २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
बैंकहरुको नाफा र कर्मचारी खर्चलाई विश्लेषण गरेर बैंकका कर्मचारीहरुको प्रफर्मेन्स निकाल्ने गरिन्छ । व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट थोरै तलब खाएर धेरै नाफा कमाउने कर्मचारीको प्रफर्मेन्सलाई राम्रो मानिन्छ ।
यो सूत्रअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको वित्तीय विवरणका आधारमा कर्मचारीको प्रफमेन्सका आधारमा पहिलो नम्बरमा नबिल बैंक परेको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा १अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने ४९ करोड ६१ ल्ाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ । बैंकको नाफाको तुलनामा कर्मचारी खर्च तेब्बरले कम हो ।
त्यस्तै, यही सूत्रअनुसार कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरुको प्रफर्मेन्स अन्तिम छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले २ अर्ब ३५ लाख १७ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको छ । यस अवधिमा बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो बैंकले नाफाको तुलनामा १ सय ३० प्रतिशत बढी कर्मचारी खर्च गरेको छ ।
कर्मचारी प्रफर्मेन्सका आधारमा सरकारी बैंकको तुलनामा निजी बैंकका कर्मचारीहरु धेरै अग्र स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् ।
रामेछापको गरजाङदेखि देवीटारसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन बन्ने
बेलुका सहमति हुन्छ : उपमहासचिव पौडेल